३ महिनामा ५० प्रतिशत व्यापार घट्यो, कहिले कति व्यापार ?
देशमा बन्दाबन्दी लागू गरिएपछिको ३ महिनामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ५० प्रतिशत गिरावट आएको छ । समग्रमा चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ११ महिनाको अवधिमा १४‍‍.३३ प्रतिशतको गिरावट आए पनि ३ महिनाको अवधिमा भने झण्डै ५० प्रतिशत (४९. ७३ प्रतिशत) ले गिरावट आएको छ ।
आव २०७५/७६ को चैत, वैशाख र जेठमा ३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भएकोमा चालू आवको चैत, वैशाख र जेठमा जम्मा १ खर्ब ८९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ ।
जेठको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ३७ प्रतिशत गिरावट देखिएको छ । चालू आवको फागुन महिनासम्म आउँदा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ४ प्रतिशतको गिरावट देखिएकोमा सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन लागू गरेसँगै व्यापारमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।
३ महिनाको बीचमा १ अर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ भने १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । चालू आवको ११ महिनामा भएको जम्मा व्यापारको पछिल्लो ३ महिनाको व्यापारको योगदान १५.९५ प्रतिशत छ भने जम्मा आयात व्यापारमा पछिल्लो ३ महिनाको योगदान १६.०४ र ११ महिनाको निर्यातमा पछिल्लो ३ महिनाको योगदान १४.८८ प्रतिशत छ ।
गत वर्ष भने जेठ महिनामा अधिक व्यापार भएको छ । गत वर्षभर भएको व्यापारमा जेठ महिनाको व्यापारको योगदान मात्रै ११ प्रतिशत थियो ।
वैशाखमा ६३ प्रतिशत गिरावट
गत आवको सोही महिनासँग तुलना गर्दा वैशाखमा सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ भने चैत महिनामा १० दिन औसत व्यापार भएकोमा पछिल्लो २० दिनको व्यापारको कारण चैतमा ४८ प्रतिशत र जेठमा केही सुधार भएर व्यापारमा ३७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
वैशाख, जेठ र असारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार
मागको कारण कम आयात
भन्सार विभागका अधिकारी माग कम हुँदा आयात कम भएको बताउँछन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले लकडाउनको सुरुवातका दिनमा सीमामा आवश्‍यक जनक्ति नभएका कारण केही समस्या परे पनि समग्रमा सामान आयातमा अवरोध नरहकाे बताए ।
'हामीले लकडाउनका बीच पनि सामानको आयात निर्यातमा सहजीकरण गरका थियौँ, कुनै सामानको अभाव नहुने गरी नै आयातको व्यवस्था भएको थियो,' विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, 'सुरुवातको केही दिन नेपाल-भारत दुवै देशमा लकडाउनका कारण मानिसको आवतजावत हुन नसक्दा समस्या परे पनि केही दिनमै यो समस्या सुल्झाएका थियौँ ।'
तर, सीमित समय मात्रै पसल खुल्ने र पसलसम्म जान सवारीसाधन नभएका कारण र आयमा आएको गिरावटले गर्दा पनि माग घट्दा व्यापार पनि घटेको भन्सार विभागका अधिकारीको बुझाइ छ ।
सरकारले लामो समयसम्म खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफूलको आयात घटाउने नीति लिए पनि लकडाउनकै समयमा यी वस्तुको आयात भने घटेको छैन । यही समयमा यी वस्तुको आयात बढेको छ । जेठमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल भारतबाट आयात भएको छ ।
लकडाउनकै समयमा १ लाख मेट्रिक टन अर्थात् करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी आयात भएको छ भने ११ हजार ४ सय ४२ मेट्रिक टन दुग्ध पदार्थ र २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ ।
८० दिनको लकडाउन : कृषकको उत्पादन बिकेन, बजारमा भने फालाफाल !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, १६ असार २०७७, १०:१६:००